सन्दिपले रोहितको तारिफ गरे, जवाफ आयो – ‘मुम्बइ जान चाहेको हो ?’ – Khabar Silo
सन्दिपले रोहितको तारिफ गरे, जवाफ आयो – ‘मुम्बइ जान चाहेको हो ?’
Posted on October 20, 2019 Author admin Comment(0)
काठमाडौं। भारतीय ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले आज टेस्ट क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाए । यससँगै उनले टेस्टमा २०० रन, एकदिवसीयमा २०० रन र टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा १०० रन पूरा गरे । रोहितको सफलतामा नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछानेले बधाइ दिँदै ट्वीट गरे । यसको प्रतिक्रियामा फ्यानहरुले उनलाई मुम्बइ जान चाहेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
रोहित शर्मा इण्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बइ इण्डियन्सका कप्तान हुन् । सन्दिप पनि आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग आबद्ध छन् । अहिले आइपिएलको ट्रान्सफर विन्डो खुला छ र यतिबेला क्लवहरुले अर्को क्लवका खेलाडी किन्न पाउँछन् । रोहित आइपिएलका सबैभन्दा सफल कप्तान पनि भएकोले सन्दिपलाई यस्तो सोधिएको हुन सक्छ ।
100 in T20I’s, 200 in ODI’s and now 200* In Test Cricket. Whataplayer he is. Hats off @ImRo45 👏
— Sandeep Lamichhane (@Sandeep25) October 20, 2019
आज दोहोरो शतक बनाएपछि रोहित टेस्ट र एकदिवसीयमा दोहोरो शतक तथा टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा समेत शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन् । यसअघि यो सफलता वेष्ट इण्डिजका क्रिस गेलले मात्र पाएका छन् । एकदिवसीयमा अहिलेसम्म ८ पटक दोहोरो शतक बनेकोमा ३ दोहोरो शतक रोहितकै नाममा छ । बाँकी ५ शतक फरक फरक ५ खेलाडीले बनाएका छन् ।
रोहितसँगै भारतका सचिन तेन्दुलकर र वीरेन्द्र सहवाग, वेष्ट इण्डिजका क्रिस गेल, न्यूजिल्याण्डका मार्टिन गुप्टिल र पाकिस्तानका फखर जमांले मात्र दोहोरो शतक बनाएका छन् । यीमध्ये सचिन तेन्दुलकरले टेस्टमा २०० रन पूरा गरे पनि एकमात्र टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा १० रनमात्र बनाएका छन् । वीरेन्द्र सहवागले पनि टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउन सकेका छैनन् । गुप्टिलले टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाए पनि टेस्टमा दोहोरो शतक बनाउन सकेका छैनन् । फखर जमांले टेस्ट र टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउन सकेका छैनन् ।
बार्सिलोनाकै धेरै सदस्यहरु नेइमार बार्सिलोना फर्किउन् भन्ने चाहँदैनन् – मेस्सी
काठमाडौं। स्पेनिस क्लव बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले बार्सिलोनाकै धेरै सदस्यहरु नेइमार बार्सिलोना नफर्किउन् भन्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरेका छन् । ‘धेरै सदस्यहरुले उनलाई फेरि बार्सिलोना फर्काउन चाहेनन्’ मेस्सीले एक अन्तरवार्तामा भने ‘यद्यपि खेल भावनाले हेर्ने हो भने यस्तो भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’ नेइमारलाई बार्सिलोना फर्काउन गाह्रो भएको बताउदै उनले भने – पहिलो कुरा […]
कोबी ब्रायन्टको मुत्यु कसरी हुनेछ ? ८ वर्ष पहिल्यै भएको थियो भविष्यवाणी !
Posted on January 28, 2020 Author admin
काठमाडौं। विश्वका चर्चित र महान बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्टको २६ जनवरी २०२० मा एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । उनको निधनप्रति विश्वभरीबाट दुःख प्रकट गरिएको छ । यससँगै अहिले उनको मृत्युको भविष्यवाणीको विषय चर्चामा छ । ८ वर्ष पहिल्यै उनको मृत्युको भविष्यवाणी भएको थियो । भविष्यवाणीमा उनको मृत्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा हुने किटान गरिएको थियो । […]
स्लाभियामाथि बार्सिलोनाको कठिन जित, मेस्सीको अर्को कीर्तिमान
Posted on October 24, 2019 Author admin
बार्सिलोनाका स्टार लियोनेल मेस्सीले च्याम्पियन्स लिगमा कीर्तिमान बनाएका छन् । समूह एफ अन्तर्गतको खेलमा स्लाभिया प्रागलाई २–१ ले हराउँदा मेस्सी च्याम्पियन्स लिगको लगातार १५ सिजनमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । चेक गणतन्त्रमा भएको खेलमा मेस्सीले बार्सिलोनालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । तेस्रो मिनेटमा अर्थरको पासमा गोल गर्दै मेस्सीले रेकर्ड बनाए । बार्सिलोनाले पहिलो हाफसम्म […]
न्यूयोर्कबाट सिधै सिड्नीसम्म उड्यो विमान
एमबीबीएससको शुल्क बढाउने निर्णय प्रति केसीको आपत्ती
एउटै श्रीमान एउटै मण्डपबाट बिहे गर्दै लक्ष्मी र सरस्वती यस्तो रहेछ कारण भिडियो हेर्नुहोस्
भगवानका प्रिय व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यी अक्षर, तपाईको हातमा पनि छ की ?
एकै परिवारका ९ जनामा ​​ओमिक्रोन संक्रमण भएको पुष्टि
२०७८ साल मंसिर २० गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
ओमिक्रोनसँग विश्व डराउनु पर्देन : डब्लूएचओ